Scales Factory - Mpanamboatra mizana China
GNH Printing Fanontana tanana. Scale Scane
Ny ambaratonga crane elektronika mahazaka hafanana avo lenta dia manana tambajotram-pifandraisana solosaina feno sy sehatra fampivoarana efijery lehibe azo ampifandraisina amin'ny solosaina.
Ny velaran'ity maridrefy elektronika mahatohitra hafanana avo ity dia feno plastika nickel, anti-harafesina ary anti-harafesina, ary misy karazana tsy misy afo sy porofo.
Ny maridrefy elektronika mahatohitra hafanana avo lenta dia miaraka amina trolley fikirakirana kodiarana efatra hampiakatra ny isan'ny serivisy ho an'ny crane mahatohitra hafanana ambony.
Famoahana be loatra, fampisehoana fampahatsiahivana ambany, fampandrenesana malefaka ambany, fanairana rehefa latsaky ny 10% ny bateria.
Ny haavon'ny crane elektronika mahazaka hafanana avo lenta dia manana fanidiana fanakatonana mandeha ho azy hisorohana ny fahasimban'ny bateria vokatry ny fanadino hanidy
GNP （PRINTICANTOR） Scale Scale
Vaovao: Famolavolana fizaran-tany vaovao, fotoana iaretana lava ary milamina kokoa
Haingana: famolavolana sensor manara-penitra avo lenta, milanja haingana, marina ary milamina
Tsara: avo lenta feno tombo-kase voaisy tombo-kase feno, fikojakojana tsy misy fikojakojana, tranga matevina misy fiantraikany mahery vaika
Milamina: programa tonga lafatra, tsy misy fianjerana, tsy misy hop
Hatsaran-tarehy: bika aman'endrika, endrika
Faritany: Fanaraha-maso lavitra, mora sy mahery
Fampisehoana lehibe sy fampisehoana teknika:
Asehoy ny famaritana Ultra-avo famirapiratana LED 5-seza fisehoana 30mm avo
Fotoana fanamafisana ny famakiana 3-7S
GNSD held Tanana - Screen lehibe） Scale Scane
Mizana elektronika tsy misy tariby, akorandriaka tsara tarehy, matanjaka, fanoherana ny hovitrovitra ary fanoherana ny hatairana, fampisehoana tantera-drano tsara. Ny fahombiazan'ny fanelingelenana anti-electromagnetic tsara, azo ampiasaina mivantana amin'ny chuck electromagnetic. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny tobin'ny lalamby, metaly vy sy vy, toeram-pitrandrahana angovo, ozinina ary orinasa mpitrandraka.
Famaritana fandanjana vita amin'ny rano tsy misy rano
Ny haavon'ny permeability dia mety hahatratra ny IP68 ary ny marimarina dia tena marina. Izy io dia manana fiasa marobe toy ny fanairana momba ny sandan'ny raikitra, ny fanisana ary ny fiarovana be loatra. Ny takelaka dia voaisy tombo-kase ao anaty boaty, noho izany dia tsy tantera-drano izy ary mora tazonina. Ny sela mitondra entana koa tsy tantera-drano ary manana fiarovana azo antoka amin'ny milina.
Ny haavon'ny permeability dia mety hahatratra ny IP68 ary ny marimarina dia tena marina. Izy io dia manana fiasa marobe toy ny alarm alarm, fanisana ary fiarovana be loatra. Mora ny mametraka azy ary mety ampiasaina. Samy matevina ny lampihazo sy ny tondro. Samy vita amin'ny vy vy izy roa.
Ny haavon'ny permeability dia mety hahatratra ny IP68 ary ny marimarina dia tena marina. Izy io dia manana fiasa marobe toy ny alarm alarm, fanisana ary fiarovana be loatra.
Famantarana milanja ny refin'ny bench
48mm fampirantiana nomerika maitso maitso
Bateria lithium 8000ma, mihoatra ny 2 volana amin'ny famoahana
Trano vy tsy matevina 1mm
Ny seza miendrika T tsy miendrika vy dia mila mampitombo ny vidiny eo amin'ny 2 dolara
Tondro fandanjana vy tsy misy fangarony ho an'ny ambaratonga sehatra
Transformer tariby varahina feno, fampiasana roa ho an'ny famandrihana sy fametahana
Bateria 6V4AH miaraka amin'ny fahamarinan-toerana azo antoka
Connector rotatable 360-degree miaraka amin'ny zoro fijerena azo ovaina
Ny seza miendrika T tsy miendrika vy dia mila mampiakatra ny vidiny
Toro-marika fandrefesana vy tsy misy fangarony
Trano vy tsy misy fangarony 304 miaraka amin'ny peratra fingotra tsy tantera-drano.
Safidy 232 tsy voatery
Bateria lithium 4000ma, 1-2 volana ho an'ny fiampangana iray;
Miaraka amin'ny taratasy fanamarinana porofo-mipoaka, miaraka amin'ny patanty mamonjy herinaratra 3.7V
Vaovao- Indraindray ny lanjan'ny ABS amin'ny lanjan'ny sehatra
Fitaovana fandanjana LED lehibe
Ny fandanjana sy ny fahatsapana dia azo ahitsy, miaraka amina asa feno
Famaritana ABS manisa ny haben'ny sehatra
OCS-GS held Tanan-tanana. Scale Scane
1、Tela enta-mavesatra tafiditra tanteraka
2、Fivadihana A / D: fiovam-po analog-to-digital Sigma-Delta 24-bit
3、Fantsom-pifandraisana nandrisika, tsy mora simba sy harafesina
4、Famolavolana lohataona fararano fisorohana mba tsy hianjera amin'ireo zavatra milanja
Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Lanja voamarina, Calibration Mass, Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika, Calibration lanjan'ny napetraka, Shear Beam Load Cell,